Aluminium titanium carbide, Ti3AlC2 - Goodao Technology Co, Ltd.
Titanium-aluminium carbide (TI-Al carbide) imhando nyowani yetatu-nhurikidzwa dhizaini zvedongo zvinhu, izvo zvakave zvichinetsekana nevazhinji masayendisiti epanyama uye vefizikisi nekuda kwenzvimbo dzayo dzakasiyana.
Titanium yealuminium carbide (Ti3AlC2) ndeyemakona matanhatu echristal system, uye ine hunhu hwesimbi uye ceramics: ine imwecheteyo conduction uye kupisa conduction sesimbi, asi zvakare iine yakafanana yakakwira elastic modulus uye yakanakisa yepamusoro-tembiricha mega zvimiro seceramic. , ine yakanaka conductivity uye kupisa conduction kugona, yakakwira elastic modulus uye yakaderera Vickers kuomarara, uye yakanaka kukuvara kuramba kugona. Inogona kuvezwa kumakamuri tembiricha uye kuburitsa epurasitiki deformation pakakwirira tembiricha Iyo ine zvakare yakanaka yepamusoro tembiricha kugadzikana uye oxidation kuramba. Iyo zvakare ine yakanaka yekupisa yekuvhunduka kuramba, kukuvara kuramba uye yakanakisa kemikari ngura kuramba.
MAX chikamu ceramics (inosanganisira Ti3SiC2, Ti3AlC2, nezvimwewo) irudzi rutsva rweyakagadziriswa conductive ceramics. Aya maceramics ane anopfuura makumi matanhatu ternary carbides kana nitrides. M anomirira pamberi pesimbi elementi yeboka rekushandura; A inomiririra zvinhu zveboka guru, kunyanya zvinhu zveboka rechitatu neboka rechina; X ndeye kabhoni kana nitrogen.
Ti3SiC2 ndiyo inonyanya kudzidza zvakanyanya. Ti3SiC2 yakabudirira kugadzirwa nekupisa kwakatsisa muna 1996 naPurofesa Barsoum M weDrexel University muUnited States uye nzvimbo dzayo dzakanaka dzakawanikwa. Nekuda kweiyo yakasarudzika nanometer yakatsemurwa sekristaro chimiro, irwo rudzi rwe ceramic zvinhu zvine zvimiro zvakaita sekushomeka kweiyo oxidation, kuzvidzora-lubrication, kukwirira kwekupwanyika kuomarara patembiricha yemukati uye conductivity. Rudzi urwu rwezvinhu runogona kushandiswa zvakanyanya seyakanyanya tembiricha dhizaini zvinhu, electrode brashi zvinhu, kemikari anticorrosive zvinhu uye yakanyanya tembiricha kupisa chinhu. Zvigadzirwa izvi zvinonyanya kushandiswa pakushongedza kwepamusoro, MXene precursors, inoitisa yega-yekuzora maceramiki, lithium ion mabhatiri, supercapacitors, electrochemical catalysis.
Technical parameter yeTi3AlC2:
simba rekumanikidza, MPa） 764
chafarizzvivakwa coefficient yekushisa kwekuwedzera kuwedzera kupisa
（× 10-6K ﹣ 1）
Pashure: Aluminium molybdenum carbide, Mo3AlC2
Zvadaro: 211Nobiobium Aluminium Carbide, Nb2AlC
Titanium yealuminium carbide
Titanium yealuminium carbide Mafekitori
Titanium yealuminium carbide fekitori
Titanium yealuminium carbide Mugadziri
Titanium yealuminium carbide Vagadziri
Titanium yealuminium carbide yeupfu
Titanium yealuminium carbide yeupfu Mutengo
Titanium yealuminium carbide yeupfu Quotes
Titanium yealuminium carbide Mutengo
Titanium yealuminium carbide makotesheni